Mpanamboatra sy mpamatsy tontolon'ny Cedar Interior Wholesale. Hanbo
Anaran'ny vokatra Fitaovana Cedar Interior
hateviny 12mm / 13mm / 15mm / 18mm / 20mm na hateviny kokoa
halavan'ny 900mm /1200mm / 1800mm / 2100mm / 2400mm / 2700mm / 3000mm/lava kokoa
kilasy fatotraty sedera na sedera mazava
Vita ny etona 100% mazava sedera Voalamina tsara ny tontonana hazo ka azo ampiasaina mivantana, ary azo atao tsara amin'ny alàlan'ny UV-lacquer na fomba fitsaboana manokana hafa, toy ny voakiky, vita amin'ny karibonetra sns.
Afampiharana Fampiharana anatiny na ivelany. ivelan'ny trano Rindrina. Ny famaranana lacquer efa vita dia natao ho an'ny fampiharana "ivelan'ny toetr'andro" ihany.
Fisehoana voajanahary, famolavolana malefaka, habe azo antoka, mateza.
Ny tontonana Cedar dia vita amin'ny zana-kazo 100%, ny preservatives voajanahary dia hita ao amin'ny vatan'ny Cedar heartwood deodara. Ny preservatives of Cedrus deodara dia avy amin'ny karazana extract roa, izany hoe, limonin ary phenol tsy voavahan-drano. Ny fahaizan'ny Cedrus deodara mamokatra ireo fitrandrahana ireo dia mitombo amin'ny fitomboan'ny taonan'ny hazo.
Safidy maro loko:
Manana loko miloko tsara i Cedar, ny orinasa dia afaka mamokatra tontonana sedera mialoha fandokoana mifanaraka kokoa amin'ny haingon-trano.
mandray tsara ny tabataban'ny tontolo iainana toy ny fiantraikany amin'ny tany hitandroana ny fandriam-pahalemana.
tsy mitovy amin'ireo mpamokatra hafa, afaka mamorona endrika endrika tsy manam-paharoa izy miaraka amin'ny lokony sy ny fomban'ny hevitry ny mpamolavola azy.
Fanoherana ny toetr'andro:
Ny birao sauna sedera mena dia miorina sy voajanahary, hazo matevina voajanahary tsy misy famoahana formaldehyde.
Insulate termal tsara:
vokatra ambany fitondran-tena mafana, mafana amin'ny ririnina ary mangatsiatsiaka amin'ny fahavaratra, fitsitsiana angovo ary fiarovana ny tontolo iainana mba hiantohana ny fampiononan'ny mponina
Fiarovana ny tontolo iainana sy ny maitso:
ny hazo fisaka sedera mena dia vita amin'ny hazo matevina ary apetraka ao anaty trano. Izy io dia afaka mandray ny hamandoan'ny rivotra amin'ny orana, ka hihena ny hamandoana amin'ny rivotra.
Dragon sy Phoenix famolavolana marika, fametrahana plug-in, tsotra sy mety.
Ny hazo Cedar dia iray amin'ny Softwood ara-barotra maivana indrindra, ny hakitroky ny hazo sedera mena maina dia manodidina ny 0.4kg / toratelo metatra, ary ny hakitroka somary (hery misintona manokana) dia 0,32. Ny haavony ambany dia manatsara ny sandan'ny insulation, izay manamora ny fitaterana sy ny fikirakirana hazo.
Teo aloha: Arc Cedar boards / Arc Cedar boards / Arc Cedar Siding
Manaraka: T&G Cedar Boards / Cedar cladding